I-IntiRumi Inn kunye (nenyani) iFama kwiNdawo yokutyela yeTafile - I-Airbnb
I-IntiRumi Inn kunye (nenyani) iFama kwiNdawo yokutyela yeTafile
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguKelly
· Amagumbi okuhlambela ayi-5 asetyenziswa nangabanye abantu
I-IntiRumi Inn yiPosada apho uzinzo ludibana nobunewunewu. Iipleyiti zokutyela ezikhaphayo ziyajikeleza kwaye zikhuthazwa kolona setyenziso lululo lokuvuna izitiya zethu, nto leyo ethetha ukuba isidlo sakho sakusasa (asiqukwanga) siquka amaqanda amatsha asefama, iziqhamo kunye nemifuno evela egadini. Kwanoomatrasi obutofotofo bangumqhaphu wePeruvia ophilayo! Ngelixa iCaraz, inikezela ngeyona ndlela ikufutshane yokufikelela kwezona ndawo zinomtsalane zidumileyo kwiCallejon de Huaylas kunye neHuascaran National Park.
Sinikezela ngegumbi elinombono kunye nokutya okulungele izithixo. Amagumbi azimeleyo. Izixhobo zokusebenza kunye nomsebenzi wokwakha i-Intirumi zazifumaneka ekuhlaleni okanye zenziwe ngokutsha. Amagumbi kunye nolwakhiwo lufakwe ngemigangatho ephezulu kunekhowudi, ngelixa iindonga ze-adobe zongeza ukugquma kwendalo. Amanzi ashushu afumaneka kwiitanki ezininzi ezifudunyezwe ngelanga. Indawo yethu yokutyela iyinombolo yokuqala kwi-TripAdvisor yale ndawo, ngelixa ihotele yethu kunye namagumbi avula nje kulo nyaka. Sinebha yenkonzo epheleleyo eneecocktails ezityikityiweyo. Sinamanzi amaninzi akhuselekileyo okuphinda sizalise iibhotile zamanzi ukunqanda ukusetyenziswa kweplastiki ye-sindle. Kwanesidlo sethu sasemini esipakishiweyo sifumana uphononongo oluhle kwiindwendwe zethu.
I-IntiRumi Inn yiPosada apho uzinzo ludibana nobunewunewu. Iipleyiti zokutyela ezikhaphayo ziyajikeleza kwaye zikhuthazwa kolona setyenziso lululo lokuvuna izitiya zethu, nto leyo ethetha ukuba isidlo sakho sakusasa (asiqukwanga) siquka amaqanda amatsha asefama, iziqhamo kunye nemifuno evela egadini. Kwanoomatrasi obutofotofo bangumqhaphu wePeruvia ophilayo! Ngelixa iCaraz, inikezela ngeyona ndlela ikufutshane yokufi…
Siziimitha ezili-100 ukusuka ekujikeni ukuya kwichibi elihle laseParon. (Eyona gem inkulu kunye neyona intle ye-turquoise yeCordillera Blanca.) Kananjalo siziimitha ezingama-500 ukusuka kwindawo ebhuqiweyo yenkcubeko yangaphambi kwe-Inca, i-Huaylas (yesine "huaca" endala ePeru). Nangona kunjalo siseyimizuzu eli-15 yokuhamba umgama ukusuka kumbindi weCaraz kunye neMarike.
Sikhona kwaye siyafumaneka kuyo yonke imfuno okanye inkxalabo yakho, iiyure ezingama-24 ngosuku.